$10-Milyan ayay Somalia khasaartaa Maalin kasta Internet la’aanta awgeed – Kismaayo24 News Agency
$10-Milyan ayay Somalia khasaartaa Maalin kasta Internet la’aanta awgeed
by nairobi 9th July 2017 9th July 2017 0127
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maalin waliba ay dalka soo gaarto khasaare lacageed oo gaaraya $10 Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Wasiirka Boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo shalay shir Jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in dalku uu maalinkiiba khaasarayo $10 Milyan oo doollarka Mareykanka mudada uu Internetka maqanyahay.
Wasiirka ayaa sheegay in 15ka Maalmood ee uu sii marayo Maqnaanshaha Internetka ay ka dhakatay $130 Milyan oo doollarka Mareynaka oo khasaare ah haddii uu sii socdana ay halkeeda ka soconeyso khasaaraha.
Wasiirku ma sheegin sababta uu u maqan yahay Internetka iyo goorta la soo celinayo waxaase kaliya uu sheegay in Dowladda ay ku howllan tahay dib u soo celinta adeegga Internetka ee Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya oo maqan maalinkii 16aad maanta oo Axad ah.
Sharikadaha Bixiya Internwetka ayaa sheegaya in Markab Ganacsi uu jiiray Fiilada Internetka siisay bartamaha iyo Koofurta SOomaaliya taas oo marta Badweyna Hindiya.
War Cusub: Maxaa weerarkii Ceelcade ka soo cusboonaadey???
Tifaftiraha K24 10th August 2017
TOP NEWS: Faah faahin laga helaayo Kooxo Hubeysan oo Xalay Seddex Ruux ku dhaawacay Suuq ku yaala Dagmada….